I-CBD Yokukhululeka Kwezinhlungu | I-CBD ehamba phambili ngo-2021
Imiphumela engemihle engaba khona ye-CBD Yokukhululeka Kwezinhlungu
I-Cbd, efushaniselwe i-cannabidiol, idlula ekukhuleni kokuqashelwa njengesiengezo esisha esithi "it", okungaphatha izimo zezempilo ezahlukahlukene, ezibandakanya, ukukhathazeka, ubuhlungu, nokuqwasha, ukubala nje ezimbalwa. Itholakala ngezindlela eziningi, kusuka ku- Okhilimu be-CBD kanye no-oyela wokudla neziphuzo ezifakwe yi-CBD. Kepha kuyasebenza ngempela?
I-Cbd ingenye yezakhi ezitshalweni ze-Cannabis Sativa. Insangu nayo ivela kwi-Cannabis Sativa nayo, kepha i-CBD ayinazo izinto ezithinta ingqondo ze-tetrahydrocannabinol (THC), okuyisakhi esisebenzayo sensangu. Zombili lezi zinhlanganisela zinomthelela ohlelweni lwe-endocannabinoid esinalo emizimbeni yethu. Lolu hlelo luphethe ukucubungula izinhlungu, isifiso sokudla, nenkumbulo, phakathi kwabanye.
Yize bungekho ubufakazi bangempela bezokwelapha ngemiphumela ye-CBD emzimbeni, ikakhulukazi ngenxa yendawo engwevu esemthethweni lapho i-CBD ibikhona isikhathi eside, kunobufakazi bokuthi ezingeni lokwelashwa ungasebenzisa i-CBD ukudambisa izinhlungu.
Ngenkathi kungekho lwazi lomphakathi mayelana nokuhlolwa kwemitholampilo ekusetshenzisweni kwe- I-CBD ekwehliseni ubuhlungu, ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi i-CBD inganciphisa ubuhlungu nokuvuvukala, ngenzuzo inemiphumela engemihle embalwa. Ngaphandle kwalokho, abantu babike ukuthi i-CBD iqeda ukukhathazeka nokuqwasha, izimo ezivame ukuxhunyaniswa nobuhlungu obungapheli. Ngokubhaliswa ngokusemthethweni kwe-CBD etholakala nge-hemp ezifundazweni eziningi (ezingenayo i-THC), abantu abaningi baphendukele ku-CBD njengenye indlela yokuqeda izinhlungu.
Kunconywa ukuthi abantu abaphethwe yizinhlungu ezingapheli bakhulume nodokotela babo ngokuthatha I-CBD njengenye indlela. Noma kunjalo, kukhona izeluleko kubantu abafuna ukuzama i-CBD ngezinhlungu:
Ukubhema akuyona indlela engcono kunazo zonke: Ukubhema kungalimaza amaphaphu, ngaphandle kwalokho, akuyona indlela esheshayo yokuthola ukukhululeka.
Indlela yokuphatha ibalulekile: I-CBD ithathwa kangcono nge-tincture ukuthola umphumela osheshayo, noma ngephilisi noma ama-gel capsules athambile, ukukhishwa okuhamba kancane, okunwetshiwe.
Thenga kubasabalalisi abanedumela elihle. Njengamavithamini nezinye izithasiselo, i-CBD ayilawulwa yi-FDA, ngakho-ke kungcono ukuyithola enkampanini enedumela elihle, njengeRed Emperor CBD, enemikhiqizo ehlolwe yinkampani yangaphandle esezingeni eliphakeme.
Qala kangcono ngomthamo ophansi. Ngemuva kwalokho, yenyuse kancane, uze uthole ukukhululeka okukhulu ezimpawu zakho. Landelela izimpawu zakho ukunquma ukuthi i-CBD iyakusiza yini njengesidambisi sezinhlungu.
Olunye ucwaningo lomtholampilo lukhombisile ukuthi noma uwoyela we-CBD uyinhlanganisela ephephile ngokuvamile yemvelaphi yemvelo, uwoyela we-CBD nawo ungakhipha imiphumela emibi. Imvamisa nobukhali balezi zimpawu zingahluka kuye ngomuntu. Izimpawu zemiphumela emibi kakhulu zingafaka:
Ukuzwa komlomo owomile
Amafutha e-CBD nawo angakhuphula ama-enzyme wesibindi, ayimpawu yokuvuvukala kwesibindi. Abantu abanezimo zesibindi bangasebenzisa i-CBD, kepha kufanele basebenzise uwoyela we-CBD ngokuqapha okukhulu, kahle ngaphansi kokunakekelwa kukadokotela okwazi ukwenza izivivinyo zamazinga e-enzyme yegazi njalo.
Amafutha e-CBD kufanele agwenywe ngokuphelele ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa. U-2018 cwaningo eyenziwa yi-American Academy of Pediatrics ixwayise abesifazane ukuthi bagweme insangu kanye neminye imikhiqizo etholakala iwunga ngesikhathi sokukhulelwa ngenxa yezingozi ezingaba khona ezingaphazamisa ukukhula kwengane. Yize kungeyona ngokuphelele indlela i-CBD enikela ngayo, i-CBD yaziwa ngokukwazi ukuhlunga ngesithiyo se-placental.
Uma ucabanga ukusebenzisa uwoyela we-CBD ukwelapha isimo sempilo njengobuhlungu, qiniseka ukuthi ukhuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwezempilo ukuze uqiniseke ukuthi kuyindlela efanelekile kuwe.
PreviousPost Previous:Abaphenyi bakholelwa ukuthi i-CBD ingalapha futhi ivimbele i-Coronovirus.OlandelayoPost Next:Ungayisebenzisa kanjani i-CBD Oil For Pain?